“Messi ayaa ka dambeeyay bixitaankii Philippe Coutinho” – Gool FM
(Spain) 21 Agoosto 2019. Bayern Munich ayaa xaqiijisay inay kula wareegtay laacibkii khadka dhexe ee kooxda Barcelona Philippe Coutinho heshiis hal xili ciyaareed oo amaah ah oo ay dhiibeen 8.5 milyan oo euro, iyagoo dooq u ahaysta inay 120 milyan oo euro ku wada iibsadaan xagaaga soo socda.
Hadaba halyeeyga reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Rivaldo ayaa u arka in ka tagista Coutinho ee Blaugrana ay sabab u tahay inuusan ku faraxsaneyn naadiga reer Catalonia iyo rabitaankiisa ah inuu u ciyaaro koox kale si uu markale u helo awoodiisii ciyaareed ee lagu yaqiinay waayihiisii Liverpool.
Coutinho ma uusan ka helin kooxda Barcelona fursad badan, waxayna ugu dambeyntii arrintaas sababtay in amaah ahaan uu ugu dhaqaaqo Bayern Munich xagaagan, kaddib hal xili ciyaareed iyo bar uu joogay Camp Nou.
Hadaba Rivaldo ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Aad ayaan uga xumaaday inuusan boos ka helin Barcelona, waxaa laga yaabaa inuusan qabin kalsooni badan ama uusan halkaas ku faraxsaneyn”.
“Ma fududa inaad ka mid noqoto koox diirada saareysa Leo Messi, kaliya waxaa jira ciyaartoy dhowr ah oo isku qasbi karta Barca, Coutinho ma uusan laheyn samir ku filan si uu udub dhexaad ugu noqdo dhacdadan” ayuu hadalkiisa ku soo xiray Rivaldo.
Lambarka uu Franck Ribery u xiran doono kooxdiisa cusub ee Fiorentina oo la shaaciyey... (Waa kuma ciyaaryahanka looga siibay?)